Endrik'io pejy io tamin'ny 26 Mey 2019 à 12:20
338 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 26 Mey 2019 à 12:04 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 26 Mey 2019 à 12:20 (hanova) (esory)
Ireto avy ny fitodika sasany mahakasika ny matoanteny:
* [[Fitodika mpanao]]: ''<u>Mikapa</u> hazo amin'ny antsy ny ankizy''.
* [[Fitodika sehatra]]: ''<u>Mitaraina</u> ny vahoaka noho ny ataon'ny mpitondra''.
* [[Fitodika iharana]]: ''<u>Kapain</u>'ny ankizy amin'ny antsy ny hazo''.
* [[Fitodika atao]]: ''<u>Aketsa</u> ny vary''.
* [[Fitodika fitaovana]]: ''<u>Akapa</u>n'ny ankizy ny hazo ny antsy''.
*[[Fitodika mpandray]]: ''Tolorana tanana ireo mila fanampiana''.
* [[Fitodika mpamari-toe-javatra]]: ''<u>Ikapan</u>'ny ankizy ny hazo ny antsy''.
* [[Fitodika mpampanao]]: ''<u>Mampikapa</u> hazo ny ankizy ny mpampianatra''.
* [[Fitodika mpifanao]]: ''<u>Mifampikapa</u> amin'ny antsy ny ankizy''.
==== Fitodika tsy mahakasika ny matoanteny ====
* [[Fitodika tsaraina]]: ''<u>Tsemboka</u> ilay mpangalatra.''
* [[Fitodika tompon-javatra]]: ''<u>Fotsy volo</u> izany lehilahy izany''.
* [[Fitodika mpamari-toe-javatry ny tsaraina]]: ''<u>Nahatsemboka</u> ilay mpangalatra ny fanenjehana azy.''
* [[Fitodika mpamari-toe-javatry ny tompon-javatra]]: ''Ny fahasahiranana no <u>nahafotsy volo</u> izany lehilahy izany.''
=== Fitodika sy fiendrika araka an-dRabenilaina ===
Ny fiendrika dia miankina amin'ny endriky ny tsirinteny amin'ny matoanteny tsy ampifandraisina amin'ny lazaina sy ny fameno. Io no atao amin'ny teny frantsay hoe ''voix'' na amin'ny teny anglisy hoe ''voice''. Ireto avy ireo fiendrika ireo:
Ny fitodika dia miankina amin'ny hevitry ny matoanteny mifandray amin'ny vara sy ny fameno ary ny teny mety mampifandray (mpampiankin-teny) ny [[Vara (fitsipiteny)|vara]] matoanteny amin'ny fameno, raha atao lazaina io fameno io. Ny fitodika no atao amin'ny teny frantay hoe ''diathèse'' fa amin'ny teny anglisy hoe ''diathesis''. Ireto avy ireo fitodika ireo izay misokajy roa:
== Fiendrika sy fitodika ao amin'ireo fiteny eoropeana ==
Roa na telo ny fiendrika fantatra indrindra ao amin'ireo fiteny eoropeana: ny fiedrika[[fiendrika mañano]] sy ny [[fiendrika anoina]]. Manampy azy ireo ny [[fiendrika tampody]] na ny [[fiendrika anelanelany]].
=== Ny fiendrika mañano ===
Ho an'ireo mpikaroka ao amin'ny [[haiteny ara-piofohana]] dia misampana avy amin'ny matoanteny mananomañano ny matoanteny amin'ny fiendrika anoina. Amin'ny fiteny sasany, ny fampitodihana ny fehezanteny amin'ny anoina dia mety hanova endrika ny teny (anarana na mpisolo sns) atao lazaina (ilay teny fameno ao amin'ny fehezanteny manano).
Matetika koa dia ialohavan'ny [[mpampiankin-teny]] milaza ny mpanao ny asa ilay anarana na mpisolo sns mitana ny anjara asa fameno (ilay teny nitana ny anjara asa lazaina tao amin'ny fehezanteny manano). Izany mpampiankin-teny izany dia ny hoe ''par'' ao amin'ny fiteny frantsay, ''by'' ao amin'ny fiteny anglisy, ''ab'' ao amin'ny fiteny latina sns. Ao amin'ny fiteny sasa dia ilaina ny fampiasana [[matoanteny mpanampy]] apetraka eo alohan'ny [[ova-matoanteny]] (''etreêtre'' ao amin'ny fiteny frantsay, ''be'' ao amin'ny fiteny anglisy, sns) nefa ny fiteny sasany tsy mila an'izany (isan'izany ny fiteny malagasy).
Ny [[fiendrika anelanelany]] (izay atao hoe koa "fiendrika anelanelany anoina") dia fiendrika hita ao amin'ny fiteny indo-eoropeana (ohatra: ny [[fiteny grika taloha]] sy ny [[Fiteny sanskrity|fiteny sanskrita]] sy ny [[fiteny latina]] ary ny [[fiteny islandey]]. Ny matoanteny amin'ny fiendrika anelanelany ao amin'ny fiteny grika taloha dia miafara amin'ny -''ομαι'' (''-omai'') izay fiafaran'ny matoanteny amin'ny fiendrika anoina nefa tsy voatery hanana hevitra anoina.
Raha ny heviny no jerena dia ahitana azy ihany koa ny fiteny sasany ankehitriny nefa tokony hatao hoe ''fitodika'' fa tsy ''fiendrika'' izany satria mitovy amin'ny fiendrika mañano ihany. Saika hitovy amin'ny fiendrika tampody ao amin'ny fiteny frantsay izy nefa tsy mampiasa [[Mpisolo tena (fitsipiteny)|mpisolo tena]] fameno mitovy laharana amin'ny mpisolo tena misahana anjara asa lazaina. Indraindray koa dia atao hoe "fiendrika anelanelany" ny fiendrika tampody.
==== FitenyNy fiendrika anelanelany ao amin'ny fiteny grika taloha ====
''Δέχομαι'' (''dékhomai'') "Mandray aho".
==== FitenyNy fiendrika anelanelany ao amin'ny fiteny eoropeana ankehitriny ====
Ny fiteny eoropeana ankehitriny dia heverin'ny mpahay teny sy ny mpanao fitsipiteny sasany fa manana io atao hoe fiendrika na fitodika anelanelany io nefa tsy amin'ny fiendrika anoina (ny an'ny fiendrika anelanelany ao amin'ny fiteny grika) ny endriky ny matoanteny fa amin'ny endrika mañano.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/970952"